5 Alternatives iMovie tsara indrindra ho an'ny Windows 10 - Softwares
Taorian'ny famoronana ny fakantsary dia nandroso be tamin'ny tontolon'ny horonan-tsary ny teknolojia. Ny horonan-tsary dia fialamboly lehibe ho an'ny olona manerantany. Apple dia niaraka tamin'ny kalitaon'ny rindrambaiko tsara indrindra tamin'ny fitaovany rehetra. iMovie dia iray amin'ireo rindrambaiko tsara indrindra amin'ny fanitsiana horonantsary, saingy tsy misy iMovie ho an'ny windows.
Faly ve ianao mampatsiahy anao ny dianao? Ka maninona ianao no tsy misambotra azy rehetra?
Amin'ny alàlan'ny iMovie dia azonao atao ny manitsy ny horonan-tsarinao amin'ny fomba tsara indrindra. Maneran-tany ity rindranasa ity dia ampiasain'ny vloggers iraisam-pirenena sy nasionaly. Fa ny fijanonany ny maro amin'ny fampiasana azy dia marina. Voafetra ho an'ny mpampiasa Apple Mac ihany izany, saingy tsy mila sosotra ianao satria nitondra anao taty izahay hahitanao ny vahaolana tsara indrindra.
Mpanonta horonan-tsary sy mpaka sary matihanina mitady fomba hafa afaka manome azy ireo kalitao tsara sy fiasa tsara indrindra aorian'ny iMovie.Ity lahatsoratra ity dia haneho ny fomba hafa mahomby indrindra ho an'ny iMovie amin'ny fikandrana horonan-tsary.
Safidy iMovie tsara indrindra ho an'ny windows 10:
Movavi dia iray amin'ireo rindrambaiko fanovana horonantsary tsara indrindra ary safidy tsara indrindra ho an'ny iMovie ho an'ny windows.
Ireto manaraka ireto no tena mampiavaka an'i Movavi izay nahatonga azy io ho ao anatin'ny lisitry ny safidy tsara indrindra an'ny iMovie ho an'ny windows.
Luts:Ity fampiasa ity dia manome ny mpampiasa hamerina ny rivotra iainana amin'ny horonan-tsarinao miaraka amina loko miloko. Azonao atao ny misafidy ny loko misy loko amin'ny sarimihetsika tianao ary apetraho amin'ny horonan-tsarinao.
Synchronization:Ity rindrambaiko ity dia manampy anao hampifanaraka ny rakipeo sy rakipeo izay noraketinao manokana.
Fitaovana logo: Ny fitaovana logo dia manampy anao manampy logo amin'ny horonan-tsarinao. Hahatonga anao ho liana kokoa amin'ny fanovana izany.
Auto-vaovao farany:Ny rindrambaiko dia manavao ireo fiasa vaovao rehetra ho azy. Noho izany, indraindray dia ataon'izy ireo faly ianao amin'ny fahagagana.
Endri-javatra maro hafa toy ny sivana, fakana sary, vahaolana avo lenta, fanamafisana ary fihetsika no hahatonga anao hahatsapa ho afa-po na dia tsy manana iMovie aza.Movavi dia toa ny safidy tsara indrindra ho an'ny iMovie ho an'ny varavarankely, satria manana fiasa mahaliana sy mahafa-po maro izy. Manome ny vahaolana rehetra mety hihaona amin'ny fitakianao amin'ny fanitsiana horonantsary.
Rafitra fanavaozana mandeha ho azy.
Misy dikanteny maro io.
Fandrindrana ny fandraisam-peo sy rakipeo.
Tsy azo atao ny maka sary an-tserasera.
Izy io dia iray amin'ireo mpamoaka horonantsary tsara indrindra izay miasa ho safidy tsara indrindra amin'ny iMovie ho an'ny varavarankely, birao ary PC.Izy io dia marobe momba ny tsenan'ny mpanjifa. Saika ny olona rehetra no afaka mampiasa an'ity rindrambaiko ity hanovana horonan-tsary, satria tsy mora ampiasaina. Raha tsy tonian-dahatsary matihanina ianao fa mikendry ny ho iray, Filmora no safidy tsara indrindra ho anao.
Ireto manaraka ireto dia sasany amin'ireo fiasa tena ilaina an'ity safidy iMovie ho an'ny windows ity.
Manana fanohanana endrika malalaka izy io.
Ny fiasan'ny fanovana dia misy heriny lehibe.
Misy vokany hita maso io.
Ny rindrambaiko dia manana fiasa marobe izay afaka manampy amin'ny fanovana horonantsary ary hahagaga azy. Izy io dia manana vokatra sy safidy maro isan-karazany hanomezana fahafaham-po ny fitakianao.Azonao atao ny manangona na manaparitaka haingana ny sarinao, ny horonan-tsarinao. Afaka manampy backtrack ny iray amin'ny alàlan'ny fisafidianana izay feo tianao. Ny fandraketana feo iray dia azo ampidirina ao anaty horonan-tsary ho toy ny backtrack. Izy io dia manana endri-javatra tsy manam-paharoa toy ny mozaika, mifanatrika ary mitongilana, sns.
Manana safidy ny mampakatra ny horonan-tsarinao amin'ny sehatra media sosialy isan-karazany, na azonao ampirimina amin'ny fitaovanao.Izy io dia mifanaraka amin'ny mpampiasa rehetra ary mety horaisina ho safidy tsara indrindra ho an'ny iMovie ho an'ny windows.
Mifanaraka amin'ny fikandrana rehetra hatramin'ny Windows 10
Tsy fitoniana ratsy
3. Mpanonta horonan-tsary hitsin-dàlana
Tonian-dahatsary horonan-tsary hitsin-dàlana dia rindrambaiko hafa matanjaka iray hafa ho an'ny iMovie ho an'ny windows. Ity rindrambaiko ity dia loharano misokatra ary mifanaraka amin'ny Mac, Linux ary ny windows.
Ny sasany amin'ireo fisehony dia mitovy amin'ny Filmora, saingy na izany aza, tsy mitovy amin'ny lafiny maro.Ireto misy sasany mampiavaka azy:
Izy io dia manana fanohanana endrika malalaka toa an'i Filmora.
Ny interface tsara no natao.
Sivana azo ovaina.
Fampidinana mivantana amin'ny sehatra media sosialy.
Ny rindrambaiko dia manolotra endrika be dia be izay afaka manampy anao amin'ny fanovana horonantsary mahafinaritra.Izy io dia manana endri-javatra sasany mitovy amin'ny Filmora, toy ny fanohanana amin'ny endrika malalaka, saingy miaraka amin'ny endri-javatra mahavariana amin'ny sivana azo nohaingoina. Ny fampiasana an'ity rindrambaiko ity dia mety ho traikefa nahafinaritra anao.
Hamafana ny interface.
Fanondranana mafy ho an'ny fitaovana sasany.
Tsy misy topi-maso ny sivana alohan'ny hampiasana azy.
4. Element Premiere Elemen
izanydia fitaovana fanovana horonantsary maimaimpoana izay manampy ny mpampiasa Windows sy Mac hanova ny horonantsary avo lenta.Fitaovana avo lenta io, ary manana fiasa marobe izay mampalaza azy sy tsara kokoa noho ny rindrambaiko hafa ho safidy iMovie tsara indrindra ho an'ny windows.
Ireto misy sasantsasany amin'ireo singa misongadina ao amin'ny singa adobe premiere.Ny fanovana marani-tsaina mandeha ho azy dia mampahafantatra anao ireo fanovana mahavariana azonao amin'ny horonan-tsarinao aorian'ny fametrahany azy io endrika io.
Ny famoronana fiara dia natao manokana hanampiana sivana sy vokany ho an'ny sarinao ho azy. Ny fampiasana an'ity rindrambaiko ity dia afaka manampy anao hampanjavozavo na hanazava izay faritra manokana ao amin'ny horonan-tsarinao hahatonga azy ireo hifanaraka amin'ny tinady sy ilainao.Izy io dia misy fihenan'ny tabataba, izay manatsara ny horonantsary voatifitrao tamin'ny hazavana ambany.
Adobe dia iray amin'ireo rindrambaiko malaza indrindra amin'ny fanitsiana horonantsary. Izy io dia manana fiasa mandroso maro izay mahatonga azy ao amin'ny lisitry ny iMovie safidy dimy tsara indrindra ho an'ny windows.
Ireo famoronana mandeha ho azy, fanovana manan-tsaina, ary fisafidianana faritra manokana ho an'ny vokatra samihafa dia mahatonga azy io azo ovaina kokoa. Izy io dia manana endri-javatra maro hafa, toy ny fanitsiana ny toeran'ny tarehy, famerenana ny làlan'ny mozika, ary ny famoahana ny zavona izay mamporisika azy bebe kokoa.
Fialam-boly mandeha ho azy sy fiasa fanovana manan-tsaina
Mpanonta horonan-tsary Avidemux no fitaovana fanovana fanovana izay efa be mpampiasa indrindra ho solon'ny iMovie ho an'ny varavarankely.Izy io dia mifanaraka amin'ny windows, Mac, Linux, ary sehatra hafa. Tsy mora ampiasaina ihany koa izy io, ary mazàna, ampiasaina hanovana horonantsary tsotra.
Ireto manaraka ireto no mampiavaka an'i Avidemux:
Manana sivana isan-karazany izy io.
Izy io dia afaka mamoaka rakitra.
Afaka manamboatra script izy io.
Izy io dia manana fahaiza-manao mahomby amin'ny fanapahana horonan-tsary ary hahatonga azy ireo ho kely kokoa.
Tsy maintsy mandeha amin'ny editor video Avidemux ianao raha tsy tonian-dahatsary matihanina ary mitady rindrambaiko fanovana horonantsary tsotra ianao.Izy io dia manana ny fanapahana, fanalefahana, fanivanana ary fametahana feo hafa izay mety hangataka horonan-tsary tsotra.
Haingana ny fanodinana horonantsary.
Mora ampiasaina izy io.
Tsy mahafeno fepetra amin'ny fanovana horonantsary sarotra
Na dia iMovie aza no rindrambaiko fanovana horonantsary tsara indrindra, tsy misy amin'ny fitaovana hafa ankoatry ny Mac, noho izany ny mpanonta video dia tokony hanana ny safidy tsara indrindra an'ny iMovie ho an'ny windows.Ny lahatsoratra etsy ambony dia naneho fahalalana momba ireo safidy tsara indrindra ambony indrindra ho an'ny iMovie ho an'ny windows. Ny rindrambaiko rehetra voalaza etsy ambony dia mifanaraka amin'ny windows.
Mora idirana sy mora ampiasaina izy ireo. Azonao atao ny manana fanitsiana sy fanombatombanana tsara ny horonan-tsarinao, sary ary rakipeo miaraka amin'ny fampisehoana manaitra.Ity rindrambaiko ity dia hanampy amin'ny fijerena ireo vlogs Youtube anao na horonan-tsary Instagram, na ny horonantsary Facebook mampakatra mahavariana, manaitra ary manan-kery kokoa.
Safidy CamScanner tsara indrindra
Mbola miaraka amin'i Natalia Dyer ve i Charliae Heaton?
Space Force Season 2: Daty famoahana sy ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao
ny fomba fanidiana fampiharana amin'ny iphone
ny fomba hahazoana robux maimaim-poana ao amin'ny solosaina
app emulator ho an'ny Windows 10
ny fomba hijerena tenimiafina netflix
kaody xbl maimaim-poana tsy misy fanadihadiana
mozika maimaim-poana ho an'ny solosaina an-tsekoly